सुपर कप: लिभरपुललाई रोक्ने लक्ष्यमा लाम्पार्डको चेल्सी | Hamro Khelkud
सन्दीप सम्मिलित कर्नाटक फेरि पराजित
कलन्दर्सविरुद्ध सन्दीपलाई दुई महत्त्वपूर्ण विकेट
पाकिस्तान पहिलो दिनमै अल आउट
क्विक्स कप अन्तर विद्यालय फुटबलको अन्तिम चरण आइतबारदेखि
आईपीएल : करोडौं मूल्यमा बिक्न सक्ने ५ फुकुवा खेलाडी
आर्मीलाई हराउँदै बीबीसी सेमिफाइनलमा
सुपर कप: लिभरपुललाई रोक्ने लक्ष्यमा लाम्पार्डको चेल्सी
एजेन्सी – चेल्सीका प्रशिक्षक फ्रान्क लाम्पार्डले चर्को आलोचनाका वावजुद पनि क्लबका युवा खेलाडी मौका दिन नछाड्ने प्रष्ट पारेका छन् । प्रिमियर लिगमा सिजनको पहिलो खेल म्यानचेस्टर युनाइटेडसँग ४–० ले गुमाएपछि चेल्सीका प्रशिक्षक लाम्पार्डको आलोचना भएको थियो । त्यसमा चेल्सी र युनाइटेडका पूर्व प्रशिक्षक जोजे माउरिन्हो मुख्य छन् ।
लाम्पार्डले कर्ट जुमा, आन्द्रेस क्रिस्टिन्सन, मासोन माउन्ट र टमी अब्राहमलाई पहिलो रोजाइमा उतारेका थिए । खेलपछि माउरिन्होले माउन्टको चर्को आलोचना गरेका थिए । तर, लाम्पार्डले आफ्नो छनोटमा कुनै कमजोरी नभएको बताएका छन् । उनले माउन्ट र टोलीका युवा खेलाडी मौका पाउनका लागि हकदार रहेको संकेत गरेका छन् ।
‘ एगोलो कान्टे चोटग्रस्त छन्,’ बुधबार लिभरपुलसँग सुपर कप खेल्ने तयारीमा रहेको चेल्सीका प्रशिक्षक लाम्पार्डले भने, ‘उनी कति महत्त्वपूर्ण खेलाडी हुन् मलाई थाहा छ । युनाइटेडसँगको खेलका दौरान उनलाई थप चोट लाग्यो । चोट कस्तो छ त्यो हेर्नुछ ।’
उनले आफ्नो निर्णयको बचाउ गर्ने क्रममा खेल जित्ने उद्देश्यका साथ टोली तयार पारेको बताएका छन् । उनले उमेरलाई मुद्दा मान्न चाहेनन् । ‘क्षमताका आधारमा माउन्टले मौका पाउनु पथ्र्यो,’ उनले भने, ‘मलाई युवा खेलाडीलाई खेलाउन कुनै डर छैन । हामीले कसरी सेट अप गछौं त्यो महत्वपूर्ण हो । हाम्रा केहि खेलाडीको आक्रम कताबाट म प्रभावित छु । ‘
लाम्पार्डले माउन्टको कसैसँग तुलना गर्न उचित ठानेनन् । ‘म कसैसँग तुलना गर्न चाहन्न । उनले आफ्नो ठाँउमा निकै महेनत गरेका छन् । उनले कसरी खेले त्यो महत्वपूर्ण हो,’ उनले थपे, ‘उनले राम्रो प्रदर्शन गरे । म उनको ठूलो समर्थ हु । ‘ लाम्पार्डले टोलीका थ्रुपै अनुभवी खेलाडीसँगै युवा खोलडीलाई पनि मौका दिने प्रष्ट पारेका छन् । तर, बुधबारको खेलका लागि चोट मुख्य चुनौति हुन सक्ने संकेत गरे ।
‘कान्टेको अझै सानो चोट छ । म उनीसँग सोधेरै उनको बारेमा निर्णय गर्ने छु ,’ उनले भने,’ विलियन र रुडिगर पनि छन् । उनीहरु अर्को स्तरमा छन् । विलियन पनि फिट हुने क्रममा छन् । तर उनलाई चुनौतिपूर्ण खेलमा उतार्नु जोखिम हुन सक्छ । उनले यो साताबाट फिटनेसमा काम गन थालेका छन् । सायद उनी बेन्चमा हुन सक्छ । रुडिगरको अवस्था पनि त्यस्तै हो ।’
कतिपयले चेल्सीले इडन हाजार्डको विकल्प छिटो तयार पार्नुपर्ने बताएका छन् । हाजार्ड यहि सिजन चेल्सीबाट स्पेनिस सफल टोली रियल म्याड्रिड गएका थिए । ‘ म हाजार्डको ठूलो फ्यान हु । उनी विश्व फुटबलका उत्कृष्ट खेलाडीम मध्ये एक हुन् । समयक्रमसँग उनी चेल्सका लागि एक प्रभावशाली नेता थिए,’ लाम्पार्डले भने,’ व्यक्तिगत रुपमा उनको विकल्प पाउन कठिन छ । तर हामी सकारात्मक पक्ष भने हामी टोलीका रुपमा तयार छौं । समयसँगै अघि बढ्ने हो । हाजार्ड, टेरी, ड्रोग्बा कुनै बेलाका महत्त्वपूर्ण खेलाडी हुन् । ‘
बिहीबार, मंसिर ५, २०७६
खेलभन्दा खेलाडी ठूलो हुन सक्दैन !
सिलवाल सर, अलि कम बोल्ने कि ?
बंगलादेश इमर्जिङ टिम्स कपको फाइनलमा
‘वेल्स, गल्फ, म्याड्रिड’
तीन अर्धशतकसँगै इंग्ल्यान्डको बलियो प्रर्दशन
मेन्डिस श्रीलंकाको साग टोलीमा